Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo jooga NASA oo ku saabsan Shaqada Cimilada Degdegga ah
Degdegga cilmiga dhulka iyo daraasaadka cimiladu waxay soo ifbaxday maanta oo Jimce ah iyadoo madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris uu booqday Xarunta Duulimaadka Hawada sare ee NASA ee Goddard ee Greenbelt, Maryland. Madaxweyne-ku-xigeenka waxa uu si toos ah u eegay sida barnaamijka hawada sare ee qaranku u daraaseeyo isbeddelka cimilada iyo bixinta xog muhiim ah si loo fahmo isbeddelka meereheena iyo saamaynta ay ku leeyihiin nolosheena.
Intii lagu guda jiray booqashada, maamulaha NASA Bill Nelson ayaa daaha ka qaaday sawirradii ugu horreeyay ee Landsat 9, oo ah howlgalka wadajirka ah ee NASA iyo Sahanka Juquraafi ee Mareykanka (USGS) oo la bilaabay dabayaaqadii Sebtembar. Sawiradu waxay muujinayaan Detroit oo ay la jaar yihiin harada St. Clair, xeebta Florida oo isbedelaysa, iyo meelaha Navajo Country ee Arizona. Waxay ku dari doonaan xogta hodanka ah ee naga caawinaysa la socodka caafimaadka dalagga iyo biyaha loo isticmaalo waraabka, maaraynta khayraadka dabiiciga ah ee muhiimka ah, iyo la socoshada saamaynta isbedelka cimilada.
Sawirada cusub, oo dhamaantood la helay Oct. 31, ayaa sidoo kale bixiya xog ku saabsan isbeddelka muuqaalka ee Himalayas iyo Australia, oo ku daray Landsat diiwaanka xogta aan la barbar dhigi karin ee ku dhawaad ​​​​50 sano ee kormeerka dhulka ku salaysan.
"Runtii waxaan aaminsanahay in dhaqdhaqaaqa bannaanku yahay ficil cimileed. Hawsha boosku waa waxbarasho. Dhaqdhaqaaqa booska sidoo kale waa kobaca dhaqaalaha. Sidoo kale waa hal-abuur iyo dhiirigelin. Waxayna ku saabsan tahay amnigeena iyo awoodeena,” ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka. "Marka ay timaado dhaq-dhaqaaqayada boosaska, waxaa jira awood aan xad lahayn. … Markaa, inta aan halkan ka soo baxayno, aan sii wadno ka faa’iidaysiga fursadda bannaan.”
Harris iyo Nelson waxay sidoo kale ka wada hadleen ku dhawaaqista NASA ee Hawlgalka Venture-ka cusub ee Dhulka-3 (EVM-3). Baaritaanka Kor-u-qaadista Convective (INCUS) waxay baran doontaa sida duufaannada kulaylaha iyo onkodku u koraan oo ay u xoojiyaan, taas oo gacan ka geysan doonta hagaajinta cimilada iyo moodooyinka cimilada.
"Khubarada NASA maanta waxay na siiyeen muuqaalo badan oo ku saabsan siyaabo badan oo aan ugu baahanahay inaan si fiican u fahamno meereheena, laga bilaabo abaarta iyo kulaylka magaalooyinka, baddeena iyo muuqaalada badan ee aan arki karno oo ka beddelaya samooyinka," ayuu yiri Nelson. "Maamulka Biden-Harris waxaa ka go'an in uu horumar dhab ah ka sameeyo dhibaatada cimilada si ay uga faa'iideystaan ​​jiilka soo socda, NASA ayaa udub dhexaad u ah shaqadaas."
NASA, oo ay weheliso Maamulka Badweynta iyo Hawada Qaranka (NOAA) iyo USGS, ayaa ka mid ah wakaaladaha federaalka ee sameeya cilmi-baarista cimilada oo bixiya xogta cimilada ee muhiimka u ah wakaaladaha iyo ururada adduunka oo dhan. Cimilo aad u daran iyo dhacdooyinka cimilada - oo ay ku jiraan abaaro, daadadka, iyo dabka - waxay noqonayaan dhacdooyin joogto ah. Aragtida meel bannaan waxay naga caawisaa inaan barano meeraheena nidaam midaysan si aan u fahanno ifafaalahan oo aan uga faa'iidaysano dadka halka ay ku nool yihiin.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa la kulmay saynisyahano iyo injineero si uu ugala hadlo sida NASA faylalka ballaadhan ee hawlgallada sayniska dhulka ay gacan uga geystaan ​​wax ka qabashada caqabadaha cimilada ee soo wajaha adduunkeenna.
Dhaqdhaqaaqyada sayniska dhulka ee NASA ee baaxadda weyn leh waxaa ka mid ah dayax-gacmeedyada ku shaqeeya iskaashiga hay'adaha kale. Kuwaas waxaa ka mid ah NOAA iyo USGS, kuwaas oo sidoo kale gacanta ku haystay wakiillo si ay ula kulmaan Harris.
"Hadda tobankii sano ee la soo dhaafay, iskaashiga NOAA-NASA wuxuu dhigayaa tignoolajiyada adduunka ugu fiican meel bannaan si loo hagaajiyo awoodda qaranka si ay ula socdaan oo ay u saadaaliyaan cimilada dhulka iyo cimilada," ayuu yiri maamulaha NOAA Rick Spinrad, Ph.D. "Kooxaha khubarada NOAA iyo NASA ee ku nool NASA Goddard waxay horumarinayaan jiilka xiga ee dayax gacmeedyada juqraafiyeedka, oo loo yaqaan GOES-R, kuwaas oo soo saara xogta muhiimka ah ee saadaasha saxda ah iyo waqtiga saxda ah ee badbaadiya nolosha dadkana ka caawiya inay la qabsadaan isbedelka cimilada."
"Sawirada soo jiidashada leh ee Landsat 9 iyo xogta sayniska ee hoose waxay ka caawin doonaan Arrimaha Gudaha in si wanaagsan loo maareeyo dhulkeena iyo kheyraadkayaga, ilaalinta hidaha dhaqanka, ixtiraamo mas'uuliyaddayada aaminaadda ee Ameerikaanka iyo dadka asaliga ah, iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka cimilada," ayay tiri Tanya Trujillo, Waaxda ee kaaliyaha xoghayaha arrimaha gudaha ee biyaha iyo sayniska. "Maalin kasta, kaydka xogta Landsat ee ku dhawaad ​​50-sano ee ay maamusho oo ay si xor ah u wadaagto USGS waxay siinaysaa aragtiyo cusub iyo taageero go'aan saraakiisha dawladda, barayaasha, iyo ganacsiyada si ay si wanagsan u fahmaan oo ay si joogto ah ugu maareeyaan muuqaalkeena isbedelaya."
Intii ay booqatay, Harris waxa ay ku shaqaynaysay cudud robotik ah oo lagu tijaabinayay hammi shidaal ku shubasho mustaqbalka ah ee dayax gacmeedka Landsat 7. Dayax gacmeedkaas ayaa hadda baranaya Earth isagoo qayb ka ah duuliyaha Landsat.
Harris wuxuu kaloo booqday howlgalka Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem (PACE), kaas oo ku lug leh qalab hadda laga dhisayo Goddard oo loogu talagalay soo saarista 2022. PACE waxay horumarin doontaa awooda qiimaynta ee caafimaadka badda iyadoo cabbiraysa qaybinta phytoplankton - dhirta yaryar iyo algae ee ilaaliya shabakada cuntada badda. Barnaamijka GOES-R, oo dayax-gacmeedkiisa GOES-T loo qorsheeyay inuu u diro NOAA Febraayo 2022 si loo hagaajiyo saadaasha cimilada, ayaa sidoo kale la soo bandhigay.